विजयादशमी मनाइँदै (टीकाको साइत र लगाउने तरिकासहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
विजयादशमी मनाइँदै (टीकाको साइत र लगाउने तरिकासहित)
काठमाडौं, १० कात्तिक । आज विजयादशमी मनाइँदैछ । दशैंको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा रातो टीका र जमरा लगाएर मनाइँदैछ ।
रातो टीकालाई शुभ साइत र जमरालाई समृद्धिको प्रतिककमा रुपमा लिइन्छ । मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाएर आशिर्वाद लिइन्छ ।
टीका लगाइदिने पूर्व फर्कने र लगाउने पश्चिम फर्कने शास्त्रीय मान्यता छ ।
यस वर्ष विजया दशमीको टिकाका लागि उत्तम शुभसाइत आज बिहान १० बजेर ११ मिनेटमा रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । तर दसैँको दिन आफैमा शुभ रहने भएकोले टिका जमरा ग्रहणका लागि साइत खोज्न नपर्ने प्राध्यापक डा। गौतमको भनाई छ ।
दशहराको अर्थ हो दशानन रावणको पराजय (दशानन अर्थात् दश . दस ंआनन . मुख) । आजैको दिन दुर्गा भवानीले महिषाशुर नामक अशुरको वध गरेको भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । यी टिका, जमरा अनि रमाइलोको माहोल दैत्यहरुमाथी देवताहरुको विजय, असत्यमाथी सत्यको विजय अनि अमानविय तत्वमाथी मानवताको विजयका रुपमा लिइन्छ ।
सिमकोट, मंसिर २० । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयाको जबुका नजिकै शुक्रबार राति पौने ११ बजे
हिन्दु धर्ममा महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिएको छ । जुन घरमा महिलालाई पुरै सम्मान मिल्छ उसको
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भेला : ओली पक्षले गलत गरेको आरोप
मंसिर १९, काठमाण्डौ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी
मंसिर २९ गते सरकारविरुद्व देशभर प्रदर्शन : ओली लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको निष्कर्ष
काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध २९ मंसिरमा देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको